West Ham Oo Ogolaatay Heshiis Amaah Ah Oo Ay Kula Wareegeyso Weeraryahanka Reds Andy Carroll. - jornalizem
West Ham Oo Ogolaatay Heshiis Amaah Ah Oo Ay Kula Wareegeyso Weeraryahanka Reds Andy Carroll.
West Ham United ayaa ogolaatay heshiis 2 milyan ginni oo ay amaah ah u la wareegeyso weeraryahanka Liverpool Andy Corroll. Sida laga soo xigtay BBC.
Heshiiska halka xilli ciyaareed ee amaahda ah ayaa isku bedeli kara mid joogta ah dhamaadka xilli ciyaareedka soo socda, hadii West Ham ay bixiso 17 milyan ginni.
Kooxda Reds oo ciyaaryahankan ku soo iibsatay lacag rikoor ah oo gaareysa 35 milyan ginni, ayaa xilli sii horeysay iska diiday dalab dib u iibsasho ah oo ka yimid kooxdiisii hore ee Newcastle.
Carroll ayaa ku dhibtooday inuu ka muuqdo Anfield tan iyo markii uu lacag qaali ah ugu soo dhaqaaqay Liverpool, isagoo dhaliyay 11 gool 56 kulan oo uu u saftay.
Waxaana uu haatan u muuqdaa inuu dheeri ku yahay qorshaha tababare Brendan Rodgers, kaasoo soo iibsaday weeraryahanka Talyaaniga Fabio Borini, halka Clint Dempsey isna lala xiriirinayo inuu u dhaqaaqayo kooxda Merseyside.
Liverpool ayaan dooneynin inay xagaagan si rasmi ah u iibiso ciyaaryahanka, waxaana kaliya ay doonayaan heshiis amaah ah, lakiin Newcastle ayaa qorsheyneysa inay iyadana u soo bandhigto dalab kale oo cusub, madaama la filayo in Carroll uu iska diidi doono heshiiska kooxda West Ham.
Carroll ayaa sidoo kale lala xiriiriyay inuu u dhaqaaqayo kooxda Talyaaniga ee AC Milan.
9/6/2014 06:47:37 am
Magacaygu waa Adams Kevin, wakiil ka socda shirkada Adams bixinta amaah amaah laga amaahdo, waxaan siinayaa amaah ugu
dulsaarka 2%. waxaan ku siin dhan nooc oo kala duwan oo amaah ah. haddii aad u baahan tahay amaah hadda nagala soo
xiriir email this:ayaad u baahan tahay riixdo alaabta May adams.credi@gmail.com
Richard Willian link
1/13/2019 08:16:17 pm
LOAN AS FAST WAA SIDA LAGA HELAY 48 saacadood. Maalgelinta maaliyadda Richard Micro Fund Plc. Bixinta deynta aan lahayn dammaanadda sida: Deymaha la hubiyay iyo kuwa aan la hubin, Deynka ardayga, Deynka guryaha, Lacagta Deynsashada, Amaahaha caadiga ah, Deymaha aan Laheyn, Dhibaatada Dhamaadka Dhammaan waa la heli karaa.
Magaca oo buuxa:
Sarkaalka ammaahda ah ee boostada ee Via Email: (Richardwillianloancompany@gmail.com) Iyo macluumaad, La xiriir cinwaankayaga internetka: www.richardwillian.com
Mudane Richard Willian.